Barclays uye TD Bank Joinha OIN Kuchengetedza Linux kubva Patent Claims | Linux Vakapindwa muropa
Barclays uye TD Bank vanobatana neOIN kuchengetedza Linux kubva kumatare epamutemo
Bhengi iyo TD, Kambani yechipiri yekuCanada yekubata mari uye yeBarclays, imwe yemakambani makuru emari epasi rose, akabatana sangano Vhura Invention iyo Network (OIN) inova ecosystem ine chinangwa chekuchengetedza Linux nezvakataurwa patent.
Nhengo dzeOIN dzakazvipira kusaisa mapepa epatent uye vakasununguka kushandisa matekinoroji ekuchengetedza muzvirongwa zvine chekuita neiyo ecosystem.
- TD Bank inofarira kutsigira iyo Linux ecosystem, sezvo ichinyatso shandisa yakavhurika sosi software mune yayo zvivakwa, mabasa emari uye fintech mapuratifomu.
Panguva yechikamu chake Barclays inofarira kubatanidzwa kweOIN mukupikisa patent troll kusava nenhumbi uye kushungurudza zvinokatyamadza patent kukanganisa mitemo kunopesana nemakambani ari kushandisa matekinoroji matsva emari.
Semuenzaniso, iyo patent troll Sound View yakatora zvibvumirano zvinokanganisa iyo Apache Hadoop chikuva, icho chinoshandiswa nemabhangi mazhinji uye chinodzivirirwa neOINs. Mushure mekubudirira kwepamutemo patent inopesana naWells Fargo nekuenderera mberi kwematare nedare rezvemari PNC, mabhanga ari kuyedza kudzikisira njodzi dzepamutemo nekubatana nemasangano anodzivirira patent.
"Basa rezvemari nemaindasitiri eFintech ari kuwedzera kuvimba neyakavhurika sosi matekinoroji ekuvaka nekubatanidza mapuratifomu ane hupfumi," akadaro Keith Bergelt, CEO weOpen Invention Network. "Sebhanga rekutanga rekuAmerica rekutanga kujoina nharaunda yedu, tinofara kuti mutungamiri akasimbiswa seTD anozvipira patent isiri yechisimba paLinux kernel uye padhuze netekinoroji yakavhurika sosi."
"Tinoramba takanangana nekushandisa matekinoroji akanakisa emapuratifomu edu uye tinofara kubatana neOpen Invention Network (OIN), iyo inotsigira kudzivirirwa pamitemo yekutyorwa kwepamutemo nekuda kwenzvimbo dzakatekeshera," akadaro Josh. Rufu, Intellectual Property uye Mutungamiri wePatentable Innovations muTD.
Barclays yakabatanawo neLOT Network, una sangano rakatsaurirwa kurwisa patent trolls uye chengetedza vanogadzira kubva kumatare epatent. Sangano rakavambwa muna2014 neGoogle, kuwedzera paWikimedia Foundation, Red Hat, Dropbox, Netflix, Uber, Ford, Mazda, GM, Honda, Microsoft nevamwe vamwe mazana matatu vakapinda muchirongwa ichi.
LOT Network nzira yekudzivirira yakavakirwa pamuchinjiro-marezinesi kubva pamvumo yemumwe neumwe wevabatanidzi kuenda kune vamwe vese vatori vechikamu, kana ma patents aya akawira mumaoko e patent patoll Makambani anobatana neLOT Network anobvuma kupihwa marezenisi emvumo yavo kune dzimwe nhengo dzeLOT Network kana ma patents aya atengeswa kune mamwe makambani. Yakazara, LOT Network ikozvino inovhara zvakapoterera mamirioni e1,35.
Nhengo dze OIN inosanganisira anopfuura mabhizinesi mazana matatu, mazana matatu, nharaunda nemasangano vakasaina zvibvumirano zverayisense zvekugovana zvibvumirano. Pakati pevatori vechikamu vakuru veOIN, ichipa kuumbwa kwechikwata chepamutemo chinodzivirira Linux, makambani akadai seGoogle, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT & T, Juniper, Facebook, Cisco , Casio, Huawei, Fujitsu, Sony uye Microsoft.
Makambani anosaina anowana mukana wemvumo Mune simba yeOIN mukutsinhana kuzvipira kusamhan'arira kushandiswa kwetekinoroji inoshandiswa muiyo ecosystem yeLinux. Pakati pezvimwe zvinhu, sechikamu chekujoinha OIN, Microsoft yakaendesa kune vatori vechikamu veOIN kodzero yekushandisa anopfuura makumi matanhatu ezviuru zvemvumo yayo, ichivimbisa kusaishandisa kuLinux uye yakavhurwa sosi software.
Chibvumirano pakati penhengo dzeOIN chinoshanda chete kune zvikamu zvekugovera zvinowira pasi petsananguro yeLinux system ("Linux System"). Parizvino runyorwa rwunosanganisira 3393 mapakeji, anosanganisira Linux kernel, Android chikuva, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice , Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Barclays uye TD Bank vanobatana neOIN kuchengetedza Linux kubva kumatare epamutemo
helloSystem, kugovera kunoshandisa FreeBSD, kunoita kunge macOS uye kunobva kune munyori weAppImage